Doorashadii xubnaha aqalka sare ee Puntland oo socota weli iyo xubnaha ladoortay. – Radio Daljir
Doorashadii xubnaha aqalka sare ee Puntland oo socota weli iyo xubnaha ladoortay.
Oktoobar 20, 2016 3:39 b 0
Garoowe, Oct 20 2016–Xarunta barlamaanka dowladda Puntland ee Garoowe ayaa waxaa kasocda doorashaa xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya kasoo gelaya deegaamada Puntland, waxaana la aaday 40 daqiiqo oo salaad duhur ah.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, madaxweynihii hore ee Puntland Dr Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, Xildhibaan Juure, Faraxaan Cali Xuseen iyo Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere ayaa soobaxay ilaa hadda.
Waxgaradka Puntland ee gobolka Mudug oo ku dhawaaqay gudi wada xaajood.
Xaaladda Galkacyo oo kacsan iyo rasaas xoogan oo laga maqlayo dhanka Galbeed.